Anosizato : Fety be hamaranana ny "Rallye 56n-dRajao"
Taorihan’ny dia izay nahatratrarana 3 000 km ary nitetezana faritra maro, dia fety be no hamaranana ny "Rallye 56n-dRajao", rahampitso tolakandro manomboka amin’ny 3 ora eny Anosizato ao ambadiky ny Socam.
Tanàn-dehibe 10 no notetezin’ity hetsika ity, izay nosantarina tany Tsiroamandidy ary hifarana eto Antananarivo rehefa avy nandalo tany Fianarantsoa, Ambositra, Antsrabe, Toamasina, Moramanga, Maevatanana, Marovoay ary Mahajanga.
Toy ny nataony tany amin’ireo faritra ireo dia misy hatrany ny fampisehoana ataon’ireo mpilalao’ny Malok’ila.
Ankoatra ny filalaovana sary mihetsika dia mana-talenta eo amin’ny sehatry ny hatsikana sy ny mozika ihany koa ireto mpilalao ireto.
Mitohy hatrany etsy ankilan’izany ny lalao 56 izay hamaritan’ny mpanaraka ny tantara ny lohatenin’ny Malok’ila 10, izay amin’ny alalan’ny tapakila na ny SMS.
Hivoaka ny 28 septambra izao rahateo ny tapakila mangirana "Malok’ila 10 …"
Niseho tamin’ny endrika isan-karazany ity "Rallye 56n-dRajao" ity. "Tao anatin’izany ny fitsidihana toby fitaizana zaza kamboty, toera-manan-tantara, fiarahana mamboly tamin’ny tantsaha ho fampianarana ny voly varin-dRajao …" araka ny fanazavan-dRazafimandimby Mamitiana, Talen’ny Scoop Digital.